EPL: Kooxda Liverpool oo ku soo laabatay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib guul ay waqtigii dhimashada ka gaartay Everton… + SAWIRRO – Gool FM
(Liverpool) 20 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dib ugu soo laabatay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay guul dhammaadkii ciyaarta ka gaartay naadiga Everton oo ay booqatay.
Kulankan ayaa ahaa mid la is mari waayey, inkastoo aan la bixin kaarka cas maadaama kulanka labadan kooxood dhex mara uu caan ku yahay in la bixiyo kaarka guduudan, qeybtii hore ayaana lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay 64’daqiiqo kooxda Everton waxaa ka dhaacmay goolhayeheeda koowaad ee Maarten Stekelenburg, waxaana lagu bedelay oo garoonka soo galay Joel Robles.
90-ka daqiiqo ee ciyaarta ayaa soo dhammaatay, waxaana kulanka lagu daray 8 daqiiqo oo waqti daayac ah, intii lagu guda jiray waqtigii dheeriga ahaa ee lagu kordhiyey dhammaadkii ciyaarta Liverpool ayaa la timid goolka ay guusha ku qaadatay.
Goolkaas madiga ah Reds waxaa u dhaliyey Sadio Mane, kaddib markii uu dhammaystiray kubbad uu bannaanka xerada ganaaxa Everton ka soo laaday Daniel Sturridge oo bedel ku soo galay sidaas ayeyna Liverpool 1-0 kaga adkaatay Everton.
Kooxda Liverpool ayaa ku soo laabatay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo leh 37-dhibcood, halka Man City oo ku soo xigta kuna jirta kaalinta saddexaad ay leedahay 36-dhibcood.